Fantatrao ve ny karazana saron-tava tokony hividiananao coronavirus?
Saron-tava fitsaboana, saron-tava fitsaboana, saron-tava ho an'ny fitsaboana, saron-tava fiarovana, N95, KN95, 3M, sns, momba ny anaran'ireo saron-tava, nitolagaga sy nisavoritaka ny olona.
Ny karazana masonya mahazatra dia azo zaraina ho sokajy 6 mifanila amin'ny fitsipiky ny fampiasana
Ny sarobaka fandidiana fitsaboana, masika fiarovana fiarovana, N95, FFP2 dia azo ampiasaina ho fiarovana ny andrim-pitsaboana, tsy afaka ampiasaina ho an'ny andrim-pitsaboana i KN95, fa ny olon-tsotra afaka misafidy.
Ahoana no hisafidianana karazana saron-tava? Androany dia hampahafantariko azy ireo ianao, avelao hisafidy haingana ny sarontava ianao.
1. Masedoha saron-tava / fikarakarana fitsaboana
Ny saron-tava sy ny saron-tava fitsaboana dia an'ny fenitra nasionaly, YY0969, ary namboarina tamin'ny orinasany ny ankamaroany. Ny fitambaran-doko dia ankamaroany tsy lamba vita amin'ny lamba ary vita amin'ny sivana.
Ny saron-tava toy izany dia tsy afaka miantoka ny fanivanana amin'ny microorganisms sy ny vovoka pathogen, tsy afaka hahatratra ny fahombiazan'ny filtration ny singa sy bakteria ary tsy mahomby amin'ny fisorohana ny fidiran'ny pathogens amin'ny alàlan'ny taovam-pisefoana.
Ity karazana saron-tava ity dia voafetra ho an'ny sakana mekanika manokana amin'ny alàlan'ny vovoka na aerosol. Ampiasaina amin'ny fikarakarana mahazatra matetika any amin'ny hopitaly, ary ny vokatra fiarovana dia tsy mahafa-po.
Ny saron-tavy fandidiana dia tsy maintsy vokarina mifanaraka amin'ny fenitra ara-pitsaboana YY0469-2011. Raha toa ka mahafeno na mihoatra ny takian'ny YY0469 ny fenitry ny orinasa, dia afaka manonta ao amin'ny fonosana ivelany ihany koa ilay saron-tava.
Ny takelaka fandidiana dia mizara ho sosona telo: ny sosona anaty-rano manentana, ny sosona afovoany afovoany, ary ny làlan-drano ivelany. Ny fiantraikany amin'ny sivana amin'ny singa tsy misy menaka dia tokony mihoatra ny 30%, ary ny fananana sivana amin'ny bakteria dia tokony ho mihoatra ny 95 (tsy N95).
Izy io dia mety amin'ny fiarovana ny mpiasa ara-pitsaboana na mpiasan'ny olona mifandraika amin'izany, mety hisorohana ny fihanaky ny ra, ny tsiranoka ao amin'ny vatana ary ny splashes, ary misy fiasa fiarovana amin'ny taovam-pisefoana. Ny saron-tavy fitsaboana dia afaka manakana ny ankamaroan'ny bakteria sy ny viriosy ary hampihena ny mety hisian'ny fihenan-tsofina any amin'ny hopitaly.
Ampiasaina ao amin'ny tontolo fitsaboana lehibe toa ny toeram-pitsaboana, laboratoire ary efitrano fandidiana izy io, miaraka amina fiarovana azo antoka ary fanoherana ny bakteria sy ny virus. Ampiasaina indrindra indrindra mba hisorohana ny fihanaky ny gripa sy ny aretim-pisefoana.
Ny saron-dehilahy KN dia matetika no miaro ny singa tsy misy menaka. Araka ny takian'ny GB2626 standard dia mizara ny fampifangaroana ny singa tsy misy menaka. Amin'ireo, KN90 dia mihoatra ny 90% ho an'ny olan'ny sombin-javatra tsy misy menaka mihoatra ny 0,075 microns, ny KN95 dia mihoatra ny 95% ho an'ny olan'ny sombin-javatra tsy misy menaka mihoatra ny 0.075 microns, ary ny KN100 dia mihoatra ny 99.97% ho an'ny olan'ny sombin-javatra tsy misy menaka mihoatra ny 0.075 microns.
Ny takian'ny KN karazana saron-tava amin'ny fitaovana sivana dia ny akora mifandray amin'ny tarehy mivantana dia tsy manimba ny hoditra ary tsy manimba ny vatan'olombelona ny fitaovana sivana. Ny fitaovana ampiasaina dia tokony hanana tanjaka ampy ary tsy tokony hihena na simba mandritra ny fiainana fanompoana mahazatra.
Ny andian-saron-tava mitovy amin'ny KN, sy andiany KP, inona ny KP?
Ny KN dia ho an'ny sombin-javatra tsy misy menaka, ary i KP dia saron-javany ho an'ny sombi-menaka. KP90 / 95/100 dia mitovy amin'ny KN90 / 95/100 amin'ny KN.
Ny masinina KN sy KP dia mifanentana indrindra amin'ny mpamindra zezika misy menaka sy tsy misy menaka toy ny vovoka, setroka, zavona ary ny toy izany novokarin'ny fanodinana metaly tsy ferrous, metallurgy, vy ary vy, sigara, simika voajanahary, entona, fananganana ary haingon-trano. . (Fanamarihana: azo antsoina koa hoe vovoka moka izy io)
4.Miaro fiarovana miaro
Ny fitsipiky ny fiarovana ara-pitsaboana an'i Sina dia GB19083-2010. Tsy misy fanambarana N95 ato amin'ity fenitra ity, fa ny fanasokajiana ny haavon'ny 1, 2 ary ny 3 dia ampiasaina hanehoana ny haavon'ny sivana.
Ny haavo 1 dia afaka mahafeno ny takian'ny N95. Amin'ny teny hafa, raha mbola misy masika fiarovana miaro amin'ny fenitra GB19083, dia hahatratra ny fahombiazan'ny filtration ny N95 sy KN95.
Ny fahasamihafana eo amin'ny saron-tava fiarovana sy KN95 dia ny saron-tava fiarovana ara-pitsaboana koa dia misy "filofosana ra-menaka" sy ny fepetra raitra "fiarovana ny hamandoana." Ny fiantraikany amin'ny fiarovan-tava fiarovana moka momba ny ra, ny tsiranoka amin'ny vatana ary ny tsiranoka hafa dia nohazavaina, saingy tsy misy ireo karazana KN ireo.
Noho izany, ny saron-tava KN-manaraka izay mifanaraka amin'ny GB2626 dia tsy azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ara-pitsaboana, indrindra ny fandidiana be dia be toy ny tracheotomy sy ny fidiran'ny tracheal izay mety hitatra.
Ireo saron-tava eny amin'ny hopitaly dia tsy maintsy mihaona amin'ny haavon'ny 1 sy ambony ambonin'ny GB19083. Mahatratra 95% filtration io dia afaka misoroka ny fidiran'ny ranon-javatra.
Rehefa avy nilaza izany dia maro ny olona hanontany ihany koa, inona ny N95?
Ireo karazana saron-tava marobe nampidirina etsy ambony, saron-tava fitsaboana sy saron-tava fandidiana dia manaraka ny fenitra ara-pitsaboana, ny saron-tava fiarovana ary ny modely KN dia manaraka ny fenitry ny firenena, ary ny N95 dia manaraka ny fenitra amerikana.
Ny mason-tsivana N95 dia manaraka ny fenitra amerikan'i NIOSH42CFR84-1995 (NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health). N dia manondro ny fanoherana ny solika ary ny 95 dia mampiseho ny fahazoana singa marobe amin'ny fitsapana manokana. Ny fifantohan'ny tarehimarika amin'ny saron-tava dia mihoatra ny 95% ambany noho ny fifantohana zara ivelan'ny saron-tava. 95 dia tsy ny salan'isa iray, kely indrindra izy io.
Ny sakana misy sivana dia natao ho an'ny singa tsy misy menaka, toy ny vovoka, ny asidra, ny microorganisma, sns. Ny faritry ny fampiharana azy dia ny fiarovana ny areti-mifindra amin'ny rivotra iainana ataon'ny mpiasan'ny mpiasa sy ny mpiasa mifandraika, ary ny fisorohana ny fihanaky ny ra, ny tsiranoka amin'ny vatana ary mivadika mandritra ny fomba.
NIOS nanamarina ny haavon-tava mask-anti-particulate hafa dia misy koa: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99, P100, misy karazana 9.
Fanamarihana: N-tsy tahan-tsolika, R-tsy mahatanty solika, P-tahan-diloilo.
Ny fepetra takiana ara-teknika sy ny fitsapana ny ambaratonga roa ho an'ny saron-tava KN95 sy ny masin'ny N95 dia mitovy ihany, saingy samy manana ny fenitra nasionaly samihafa izy ireo.
Ny N95 dia manaraka ny fenitra amerikana, raha toa kosa ny FFP2 dia manaraka ny fenitra Eropeana.
FFP2 saron-tava no iray amin'ireo fenitra eoropeana eoropeana EN149: 2001. Nampiasaina izy ireo mba hamoahana ny aerosol manimba, anisan'izany ny vovoka, ny setroka, ny setroka, ny entona misy poizina ary ny poizin'ny poizina, amin'ny alàlan'ny sivana, manakana azy ireo tsy ho voapoahan'ny olona.
Anisan'izany, FFP1: Ny fanivanana farany ambany indrindra> 80%, FFP2: Ny fanivanana ambany indrindra> 94%, FFP3: Ny fanivanana ambany indrindra> 97%. Raha mampiasa an'ity tahirin-kevitra ity ianao dia hisafidy saron-tava mety amin'ity valan'aretina ity, dia kely indrindra ny FFP.
Ny vatan'ny sivana mason-doha FFP2 dia mizara ho sosona efatra, izany hoe, lamba roa vita amin'ny lamba tsy namboarina + takelaka iray vita amin'ny lamba vita amin'ny solika + iray sosona fanjaitra voapaika.
Miaro ny otrikaretina sy bakteria tena tsara ny mason-tsofina miaro an'ny FFP2, miaraka amin'ny fahombiazan'ny filtration mihoatra ny 94%, izay mety kokoa amin'ny tontolo mafana sy mando na miaro maharitra.
Fanontaniana farany, inona ny mason-tava 3M?
Ny "masks 3M" dia manondro ny vokatra 3M rehetra izay azo antsoina hoe saron-tava. Azo zaraina ho sokajy telo izy ireo: saron-tavy fitsaboana, saron-tava fiarovana ary saron-tava mafana mampiadana. Isaky ny mason-tava tsirairay dia manana fifantohana fiarovana samihafa.
Ny mason-tsigara fiarovana 3M dia atao any Chine ary ampidirina. Manana ny fiarovana fiarovana saron-tava fandidiana sy saron-tava fiarovana izy ireo. Ampiasaina any amin'ny hopitaly izy ireo ary afaka manivana ny sombiny amin'ny rivotra sy manakana ny tatatra, ny ra, ny tsiranoka amin'ny vatana ary ny tsiambaratelo.
Anisan'ireo saron-tava 3M, ireo manomboka amin'ny 90, 93, 95, ary 99 dia saron-tava mahomby amin'ny fiarovana amin'ny singa manimba. Samy ny 8210 sy ny 8118s no mahafeno ny fepetra takian'ny fiarovana PM2.5 any Sina. Raha te hisafidy ny hanatanteraka ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny tratry ny fahasalamana amin'ny ankapobeny, misafidiana 9010, 8210, 8110s, 8210v, 9322, 9332.
Mba hahitanao izany, fantatrao ve ny fomba hisafidianana masokely mandritra ilay valanaretina?
1, afaka mifidy saron-tava ho an'ny fandidiana, manandrana mifidy saron-tava.
2, afaka mifidy saron-tava tsy misy fofonaina, manandrana misafidy saron-tava nefa tsy fangatahana fofonaina.
World ady! Shina ady!